बिवाह अघि यौन सम्पर्क राखेको वा नराखेको बारे थाहा हुन्छ ? - Koshi Online
बिवाह अघि यौन सम्पर्क राखेको वा नराखेको बारे थाहा हुन्छ ?
काठमाडौं, २७ पुस । धेरै महिलामा रहने डर भनेको बिवाह अघि यौन सम्पर्क राखेको कुरा बारे बिवाह पछि श्रीमानले पाउँछन् कि भन्ने हो । अझ हाम्रो नेपाली समाजको केही समुदायमा त झनै विवाहपछी हुने पहिलो सहवासमा आछ्यानमा रगतको टाटो नै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ ।
युवतीको कुमारित्वको मापदण्डको रुपमा योनिमा हुने झिल्लीलाई लिईन्छ । सहवासको क्रममा रगत आउने त्यहि झिल्ली च्यातिएर नै हो । अब यो कुरा बिर्सनुहुँदैन कि त्यो झिल्ली अरु कुनै कारणले पनि च्यातिन सक्छ । जस्तै साईकल कुदाउँदा आदी । यसरी हेर्दा सामान्यतया श्रीमानले विवाह अघिको यौन सम्पर्कबारे थाहा पाउँदैनन् ।
हुन त त्यो च्यातिएको झिल्लीलाई पनि चिकित्सा विज्ञानले पुरानै अवस्था अर्थात भर्जिनिटीको अवस्थामा पुर्याउन सक्छ । यसरी सर्जरीको माध्यमबाट ‘कुमारीत्व’ को पुनप्र्राप्ति हुने विषयमा चिकित्सा विज्ञानका आ–आफ्नै धारणा छन । च्यातिएको झिल्ली योनिको भित्री भागमा रिङको आकारमा बसेको हुन्छ र सर्जरीमार्फत पहिलेकै अवस्थामा ल्याएर सिलाएर राखिन्छ । योनिमा मात्र अहिले भेजाइनल टाइटिङ, भेजाइनल रिकन्ट्रक्सन, ल्याबियाप्लास्टी, ल्याबिया रिडक्सन र हाइमेनोप्लास्टीजस्ता कन्सट्रक्टिभ सर्जरी हुन्छन् ।